विवाहपछि पहिलोपटक श्वेता खड्का आफ्नो पति विजेन्द्रसंग टिकटकमा, भिडियो भाइरल हुँदै ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
December 15, 2020 December 19, 2020 AdminLeaveaComment on विवाहपछि पहिलोपटक श्वेता खड्का आफ्नो पति विजेन्द्रसंग टिकटकमा, भिडियो भाइरल हुँदै ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
अभिनेत्री तथा ब्यबसायी श्वेता खड्काले मङ्सिर २२ गते बिवाह गरेकी छिन् । अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधन भएको करिब ६ वर्ष पछी धनगढीका विजयन्द्रसिंह रावतसँग उनले दोश्रो बिवाह गरेकी हुन् । केहि समय देखि उनीहरु प्रेममा रहेको हल्ला चले पनि दुवै पक्षले स्वीकार गरेका थिएनन ।
उनीहरुको बिवाह राजधानीको गोर्कर्ण रिसोर्टमा आयोजित एक कार्यक्रममा भएको हो । पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा निक्कै सक्रिय स्वेताले आफ्नो मनका कुराहरु त्यहि पोख्दै आएकी छन । विवाह अगाडी पनि आफ्नो निर्णयबारे सामाजिक संजाल मार्फत नै आफ्ना शुभचिन्तक माज जानकारी गराएकी थिइन ।
पछिल्लो केहि दिन उनको विवाहको तस्विर र समाचारले राम्रै ठाउ पाइरहेको छ । यसै बीच नवविवाहित श्वेता र बिजेन्द्रले विवाह पछि पहिलो टिकटक बनाएका छन । उक्त भिडियो पनि निक्कै भाइरल भैरहेको छ । श्वेता खड्काको टिकटक भिडियो हेर्न यहा क्लिक गर्नुहोस्:
यो पनि हेर्नुहोस्: स्वेताको मण्डब देखी बिदाई सम्मको भिडीयो, माईती छोड्दा बलिनधारा आशू (भिडियो सहित) ! विवाह पश्चात पनि स्वेताले आफ्नो मनमा लागेको केहि कुरा र अठोट जाहेर गरेकी छन । उनि लेख्छिन – ‘अनत्वगोत्वा : मैले सिउँदोमा सिन्दुर भरें , हातमा सप्तरङ्गी चुरा लगाएँ अनी रङ्गिन पहिरन भित्र आफुलाई सजाएँ । मैले जिन्दगीको अर्को एउटा यात्रामा पाइला चालें । मेरो यो यात्रामा मेरा सम्पुर्ण इष्टमित्र , आफन्तजन , गन्यमान्य ब्यक्तित्व , शुभचिन्तक लगाएत मलाई सँधै साथ र समर्थन गर्ने मेरा संचारकर्मी मित्रहरुको सुवेक्षा र आशिर्वादको खाँचो छ । मैले सुरु गरेको जिन्दगीको यो अर्को अध्यायमा अझै धेरै गर्न बाँकी छ । मैले नेपाली सिने जगतलाई मेरो शिरको सिन्दुर जस्तै अझै उच्च स्थानमा पुर्‍याउनु छ । निर्माणाधिन माझिटोललाई आज सँजिएको बिहेको मण्डप भन्दा पनि अझै सजाउनु छ । मैले थालेका ब्यावसायहरुलाई मेरो हातमा चम्किएका चुराहरु जस्तै चम्काउनु छ । मैले अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ । थाती रहेका मेरा कार्यहरुमा थप उत्साह र उमंग बोकेर लागी पर्नेछु ।म थप शसक्त नारीको रुपमा तपाईहरुको सामुन्ने प्रस्तुत हुनेछु । आगामी दिनमा एकल महिलाको शसक्तिकरणमा केहि गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच छ । त्यस्लाई साकार बनाउनको लागी म प्र यासरत रहनेछु । अत : मलाई तपाइहरु सम्पुर्णको साथ , साल्लाह , सुझावका साथै शुभ-आशिर्वादको आवस्यक्ता छ । हिजोका दिनमा भन्दा पनि आगामी दिनमा मैले सबैबाट अझ धेरै माया, सदभाव र साथ पाउने आशा बोकेकी छु । तपाईकी उहि छोरी /चेली, श्वेता खड्का’
विवाहमा माईती छोड्दा स्वेताको आखामा आशु रोकिएको थिएन । केहि संचारमाध्यमहरुलाई मात्र प्रवेश दिइएको उक्त विवाह समारोहमा स्वेताका आफन्त र केहि गन्यमान्य व्यक्तिहरु उपश्थित थिए । भिडियो हेर्नुहोस :
भोलिको राशिफल हेर्नुहोस : मिति २०७७ साल पौष ०१ गते बुधबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२० डिसेम्बर १६ तारिख